यौन प्यास मेटाउन भीआईपी अखडा छिरेका सांसदले जब आफ्नै श्रीमती र छोरी भेटे !!::आर एम खबर
यौन प्यास मेटाउन भीआईपी अखडा छिरेका सांसदले जब आफ्नै श्रीमती र छोरी भेटे !!
खबर सुन्दापनि धेरैलाई अचम्म लाग्छ । तर यो सत्य हो । भारत यस्तो देश हो जसको कुन भूमिमा के भइरहेको छ थाहाँ पाउँदा अर्को ठाँउकै मानिस चकित पर्छन । विश्वकै धेरै भूगोल भएको यो देशमा जनसंख्यापनि धेरै छ । यसैले अनौठा–अनौठा खबर हुन्छन् । सुपर एक्स्प्रेसले छापेको खबर अनुसार एक स्थानीय बेश्यालयमा सांसद आफ्नो यौन प्यास मेटाउन पुग्छन् ।
रकम तिरेर यौन कर्म गर्ने कोठामा तयारी अवस्थामा बस्छन् । त्यतिकै यौन प्यास मेटाई दिने युवती अध्यारो कोठामा प्रवेश गर्छिन । मधुरो उज्यालो, आवाज, चाल र हाउभाउले नै थाहा भईहाल्यो की त्यहाँ आफ्नै श्रीमती आएकी छिन् । युवतीलाई पनि थाहा भयो की ग्राहक श्रीमान् हुन् । एकअर्कालाई हेरेर दुबैको होसहवास उड्यो । श्रीमानले जहिले पनि अतिरिक्त खर्चका लागि केही पैसा दिन खोज्दा आफूसँग पर्याप्त पैसा भएको श्रीमतीले बताउने गर्थिन् । यसभित्रको गुह्य अर्थशास्त्र के हो भन्ने चाहिँ उनलाई थाहा थिएन । तर त्यस दिन एकअर्कालाई देखेपछि भने अन्य दिनजस्तो सामान्य स्थिति उनीहरुबीच रहेन ।
तर दुर्भाग्य! मंगल ग्रहमा पानी भेट्ने, चीनमा विकास गर्न सक्ने, अमेरिकामा योगदान गर्न सक्ने अनि कतार, दुबई, कोरियामा रगत-पसिना बगाउन सक्ने नेपालीको विश्वास जित्ने काम हाम्रै सरकारले गर्न सकेका छैनन्।
नेपालको समृद्धि माथि भनिएका कुराहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। अब पनि हामीले हाम्रा सन्तति र हाम्रा विकासको गतिमा कुदिरहेका छिमेकीहरूलाई नहेर्ने हो भने हामी आफैंलाई लाजमर्दो हुने छ। मैले यो देशलाई नेतृत्व गरेर केही गर्न सकिनँ भन्ने हीनताबोधले सधैं पोलिरहने छ। अब त देशका लागि केही गरौं।
नियममा थोरै नियत मात्र मिसाए पनि यो देशले काँचुली फेर्छ।
अन्तमा, प्रधानमन्त्रीज्यू, रेल र जहाजका कुरा गर्दै गरौंला, पहिले जनताको काज र सरकारको लाज धान्ने कुरा गरौं, साँचो समृद्धिका लागि काम गरौं। (लेखक विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य हुन्।)